Koobkii Adduunka Oo Lagu Kala Calaf-qaaday Iyo Faransiiska Oo Guul U Dabaal-degaya – somalilandtoday.com
Koobkii Adduunka Oo Lagu Kala Calaf-qaaday Iyo Faransiiska Oo Guul U Dabaal-degaya
(SLT-Moscow)-Goolal ay dhaliyeen Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann & gool uu iska dhaliyay Mario Mandzukic ayaa natiijo qurux badan siiyay xulka France, waxeyna taasi ka dhigan tahay in xulka Les Bleus ay markii labaad ku guuleysteen koobka Adduunka.
Kulanka wuxuu ku bilowday si xamaasad leh iyadoo Ciyaaryahanada Croatia ay u muuqdeen kuwa aad uga fiican bilowga maadaama ay dhawr jeer cadaadis saareen goolka France, tobankii daqiiqo ee ugu horreeyay waxey tageen goolka kale tiro ka badan saddex jeer taasoo ka dhigan iney aad uga fiicnaayeen dhigooda.
Ivan Perisic ayaa dhinac kala soo galay isagoo xawaare ku socda, balse kubadii uu goosha soo aadiyay si u saaxiibadiis u caawiyo waxaa ka saaray Samuel Umititi.
Markii Ciyaartu maraysay Daqiiqadii 18-aad: Mardio Mandzukic ayaa gooshiisa ku leexiyay kuabd uu geesta kasoo qaada Antoine Griezmann, goolhaye Subasic ayaa awoodi waayay inuu saaxiibkiis ceebta ka dhawro bale nasiib xumo uma noqon .
Croatia ayaa ilbidhiqsiyo waalli ah galisay dhigeeda France, laad xor ah ayey geesta ka tuurteen ka hor inta uusan soo badbaadin Lloris, mar kale ayey isku dayeen kubad ay si awood leh kusoo dhacsadeen iney ku weerar galaan balse Rakitic ayaa hawada sare ku tolay kubadii loo soo dhigay.
GOAL: Daqiiqadii 28-aad: Ivan Perisic ayaa asturay ceebta saaxiibkiisa, kubad laba xiddig ay madax ku dhufteen kadib ayaa u timid Vida kaas oo tartiib u caawiyay Ivan, xiddiga Inter Milan si qurux badan ayuu kubada uga dheereystay Kante ka hor inta uusan lugta bidix kubad awood leh ku daba marsiin Hugo Lloris.
Daqiiqadii 36-aad: Ivan Perisic oo shabaqa soo taabtay kulanka – ayaa gacanta ku taabtay kubad isagoo dhex taagan xerada ganaaxa, waqti lagu bixiyay VAR kadib garsoorka wuxuu go’aansaday inuu rigoore dhigo.
Ciyaartoyda Croatia ayaa halis galiyay tiro saddex jeer ah goolka France, laba koorne ayey soo tuurteen – balse marnaba gool kuma helin.
Qeybta hore ciyaarta waxaa lagu kala maray 2-1, oo ay ku hogaaminayaan wiilasha Didier Dechamps, halka wiilasha Zlatko Dalic ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aan caadi aheyn.
Qeybtii labaad ayaa lasoo laabtay iyadoo labada xul ay si xiiso lehaa mar kale u madadaaliyeen qof walba oo daawanayay, waxyena bilowgiibaa sameeyeen wax aan caadi aheyn.
Ante Rebic ayaa isku dayay inuu shabaqa soo taabto markii uu kubad ka tuuray xerada ganaaxa, balse Hugo Lloris ayaa ka badbaadiyay.
Kylian Mbappe ayaa si fiican u shaqeeyay markii uu ka xarooday Vida, balse kubadii uu goolka aadiyay Subasic ayaa ka badbaadiyay.
Daqiiqadii 69-aad: Mario Mandzukic ayaa helay hadiyad fiican markii Hugo Lloris uu damcay inuu falaado isagoo Shabaqiisa hor jooga, si dhibyar ayuuna shabaqa ugu beegay xiddiga ka tirsan Juventus.